Dadweynaha soomaaliyeed ku nool Uk, waxa ay xamili waysanyihii waxa ku dhacaya magaca sntv London. |
Dadweynaha soomaaliyeed ku nool Uk, waxa ay xamili waysanyihii waxa ku dhacaya magaca sntv London.
Aqristayasha websadyada kala duwan
Dad badan , gaar ahaan dadweynaha soomaaliyed ku nool Uk, waxa ay xamili waysanyihii waxa ku dhacaya
magaca sntv London. SNTV LOndon waxa uu furan yahay mudo ku dhow saddex sannadood.
Xarunta London waxa ka shaqeeya dad mutadawicin ah ee ka soo daayaa barnaamijyo kala duwan.
waxa ay geliyeen juhdi fara badan ilaa maanta. Dhowr bilood ka hor ayaa la billabay in la siiyo qofkiioba £100.
Istuudyaha talefishinka waa ijaar, waxaana uu furanyahay saddex maalmood 4ta galabnimo illaa sagaal fiidnimo,
waa afar saac oo kira ah.
Talefishinka qalaba ma leh, qalabka waxa iska leh ninka hindiga ee la yiraaahdo ANIS, waa ninka laga gatao (airka) talefishinka waxa uu billabay iiidheyada iyo xayeysiinta si dhaqaalaha , tayada barnaamijyada hore loogu mariyo islamarkaana qalab iyo istuudyo llogu helo, hase yeeshee waxba iskama beddelin. Lacagta soo gasho meel kale ayay aaddaa!
Waaxda iidheda ee hadda London laga furay waxa ay ledahay xafiis, halka telefishinka uusan qalab iyo xafiis uusan lahayn.
waxa la filayay in lacagta ka soo gasho iidhehyada iyo xayesiinta , istuudyo iyo qalab loo sameeyo talefishinka London, hase waxba soma korddhin. dadka ka shaqeeyana weli boqolkii ayaa qofwaliba bisha marka ay dhammato la siiyaa. SNV london ma leh meel lagala xiriiro.
order Viagra Gold online cheap, acquire clomid.
Taleefishinada gaarka ah, waxa ay leeyihuin qalab iyo istuuyo ee furan afar iyo labaanka sacadood, meel laga xiriirana way leeyihiin . Shqaalaha waxay qaataan mushaaro joiogta ah. Runtii, waa jahawareer, in maagaca qaran , xafiis dawladeed maaant uu sidaa u shaqaynayo? talefishinka qaranka waa inuu tusaale u noqdaa kuwa kale.
Madaxda wasaaradda warfaafinta , gaar ahaan kuwa talefishinka in sidaa u dhaammaan SNV LOndon. Talefishinka ummadda soomaaliyeed ayaa leh, waana laga danqanayaa xaaladaha sntv london u ku suganyahay.
fadlan, ama xarunta iska xira ama nooleeya.